Paul Pogba oo kula kulmay Xerada Tababarka Faranciiska xiddigii kooxdiisa ka reebay Champions League+Sawiro %
Paul Pogba oo kula kulmay Xerada Tababarka Faranciiska xiddigii kooxdiisa ka reebay Champions League+Sawiro
Xiddiga qadka dhaxe kooxda Kubada cagta ee Manchester United Paul Pogba ayaa Xerada Tababarka Xulka dalka France waxa uu kula kulmay Cayaaryahankii kooxdiisa ka reebay koobka UEFA Champions League, ee ka dhaliyey Goolasha ay ku dhinteen.
Paul Pogba ayaa lakulmay Wissam Ben Yedder oo ah Weeraryahankii labada Gool ka dhaliyey Manchester United kulankii lugta labaad Wareega 16 ka koobka Champions League,Taageeraayasha Manchester United waxaa hubaal ah in aysan jecleyn.
Wissam Ben Yedder oo ah Weeraryahan u Cayaara kooxda Sevilla ee dalka Spain ayaa looga yeeray xulka France Waxaana isku diyaarinayaa Kulamada Saaxiibtinimo ee ay lacayaari doonaan Todobaadkaan daallka Colombia iyo Russia.
Pogba ayaa bartiisa Instagram soo dhigay sawiro muujinaya Timaha oo uu marsaday Rinji buluug ah oo ah Funaanada ay ku Cayaaraan Xulka dalka France.
Gool dhalinta Horyaalka Spain oo Xiiso badan yeeshay…..
Kooxaha Arsenal iyo Real Madrid oo laba kulan oo Caawimaad ah is lacayaari doono